ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်ကို မြန်မာဘက်က ပိတ် | ဧရာဝတီ
ငြိမ်းချမ်း| November 21, 2012 | Hits:414
4 | | ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှဘက်မှ တာ့ခ်နာဖ် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဂိတ် (ဓာတ်ပုံ – ကုလားတန် သတင်းဌာန)
မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ် ကူးသန်းသွားလာခွင့်ကို မြန်မာဘက်က ပိတ်ထားလိုက်ပြီး နယ်စပ်တွင် ဖမ်းဆီးခံရကာ ပျောက်ဆုံးနေသော မြန်မာစစ်သား ၃ ဦးကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အာဏာပိုင်များက ရှာဖွေမပေးသည့် အတွက် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မောင်တောမြို့နယ် အောင်ဗလရွာသား လှေသမားတဦးက “ခြံစည်းရိုးလုပ်ရင်း အဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့ တပ်ကလူတွေကို ဘင်္ဂလားဘက်က ပြန်ရှာမပေးလို့ မြန်မာဘက်က ပိတ်ထားတာပါ။ ဘယ်တော့ ပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုတာ မသိဘူး။ လောလောဆယ်တော့ ကျနော်တို့ တရားမဝင်လှေတွေ ထွက်လို့မရဘူး။ တရားဝင် နေ့ချင်းပြန် ပတ်စ်ပို့သမားတွေကိုလည်း ပိတ်ထားတယ်လို့ ကြားပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
မြန်မာနယ်ခြားစောင့် တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ နယ်စပ်ပိတ်လိုက်သည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြု ပြောကြားသော်လည်း အသေးစိတ်ဖြေဆိုရန်မှု ငြင်းဆန်သွားသည်။
မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်စပ် တရားမဝင်နှင့် တရားဝင် ကူသန်းသွားလာခွင့်ကို ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခကြောင့် ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့မှစ၍ ပိတ်ထားခဲ့ပြီး သြဂတ်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် နေ့ချင်းပြန် နယ်စပ်ကူးလက်မှတ်နှင့် တရားမဝင်လမ်းကြောင်းကို ပြန်ဖွင့်ပေးခဲ့ကြောင်း၊ ၇ ရက်သက်တမ်း နယ်စပ်ကူးလက်မှတ်ကိုမူ ယနေ့အထိ ပိတ်ထားဆဲဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ တာ့ခ်နာမြို့နယ်ရှိ မြစ်နားရွာသားတဦးက “အခြေအနေကတော့ ဟိုဘက်ဒီဘက် သွားလာတာတွေ မရှိဘူး။ ဘင်္ဂလားဘက်က ပိတ်ထားတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ တာ့ခ်နာက နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေး ဆိပ်ကမ်းမှာလည်း မြန်မာဘက်က လှေတွေ မရှိသလောက်ပဲ။ တရားဝင်လမ်းက ၂ စီးလောက်ပဲ ရှိတယ်” ဟု မြစ်နားရွာသားက ပြောသည်။
ဖမ်းဆီးခံရသည့် စစ်သားများ ပြန်လည်ရရှိရေးအတွက် မြန်မာ နယ်စပ်ဒေသ လုံခြုံရေးနှင့် ကွပ်ကဲရေး (နစက) နှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ နယ်ခြားစောင့်တပ် (BGB) တို့ ၇ ကြိမ်ထက်မနည်း တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
မြန်မာဘက်မှ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသို့ သစ်၊ နွား၊ ဝါး၊ ဆား၊ ငါး၊ ငါးခြောက်၊ သွားရည်စာ ယိုထုတ်များ၊ အဝတ်အထည် စသည်တို့ကို တင်သွင်းကြောင်း၊ တရားဝင်ရော မှောင်ခိုကုန်ပစ္စည်းကိုပါ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက တရားဝင်အဖြစ် လက်ခံကာ ယင်းပစ္စည်းများပေါ်တွင် အခွန်ကောက်ခံကြောင်း သိရသည်။
“သစ်တို့၊ နွားတို့ကျတော့ မြန်မာဘက်က တရားဝင် ခွင့်ပြုတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ကျနော်တို့ ကုန်သည်တွေကလည်း အလုပ်အကိုင်ရှားပါတော့ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေကို ပေးကမ်းပြီး လာနေကြရတာပဲ။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ကျတော့လည်း သစ်တို့၊ နွားတို့ အပေါ်ကရတဲ့ အခွန်က အများဆုံး။ နောက်ပြီး သူတို့နိုင်ငံကို ဝင်လာတာဆိုတော့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့လာလာ လက်ခံနေတာပေါ့” ဟု တောင်ကုတ်မှ သစ်ကုန်သည်တဦးက ပြောသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဒုက္ခသည်စခန်း အမေရိကန် လေ့လာ
ဘင်္ဂလားဒေရှ့် – မြန်မာနယ်စပ် ပန်းဝါတွင် ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်
အမေရိကန် အရာရှိများပါသော အဖွဲ့ ဘင်္ဂါလီ ဒုက္ခသည်စခန်း လေ့လာ
2 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website Ko Thet November 21, 2012 - 8:45 pm	Block it until they settled & returned the captives from their side. This isakind of pressure that we should impose throughout the border. To be honest, they relied on such trade routes along the border and by blocking the border trades, it isakind of pressure that our government can impose on western unfaithful neighbour. We should have no problem with stall border trade, they are the only one relied on the trade and will suffer on this blockage. Good work government. Keep up with it.
Reply	မင်းကြီးညို November 23, 2012 - 12:53 am	နယ်စပ်ကိုအကြာကြီးပိတ်ထားလေကောင်းလေပဲ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဟာဆန်စပါးလုံလောက်
အောင်မထွက်ရှိပါဘူး။ မြန်မာဘက်က ပို့မှစားရတာပါ။ ထိုင်းတို့ ဗီယက်နမ်တို့ကဆန်ကိုဆင်းရဲ
တဲ့နိုင်ငံသားအများစုက ၀ယ်မစားနှိုင်ပါဘူး။ ဈေးသက်သာတဲ့မြန်မာဆန်ကိုပဲဝယ်စားကြရတာ
ပါ။ အိန္ဒိယဆန်ကလဲဈေးကြီးပါတယ်။ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့(၃)ဦးကို မရမချင်း ပြန်မဖွင့်စေ
လိုပါ။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရကိုယ်တိုင်က အဲဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေကို အကာအကွယ်ပေး
နေတာပါ။ မှောင်ခိုလမ်းကြောင်းတွေကိုလဲ အလွတ်မပေးပဲ စောင့်ကြပ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရခိုင်တွေကတော့ကုန်သွယ်မှုကို ခေတ္တရပ်ထားလိုက်ပါ။ ဒါဟာ အမျိုးသားရေးတာဝန်ပါ။